Aragti: Madaxweyne Lama Mahdin Marinkii Hore – Kalfadhi
Aragti: Madaxweyne Lama Mahdin Marinkii Hore
Inta aan isaga taageersanayn ee mucaaradka ah waa qaran dumis weerarkoodu bannaan yahay; saxaafadda runta sheegta waa war-xumo tashiil, xildhibaannada ra’yigooda muujinaya waa kuwa waalan, qaarkood waa kuwo xannaaqsan; kuwo dhibannaa oo halgan hubaysan Itoobiya kula jiray waa argagixiso. Aslanba waxaa ka dhaadhacsan in malaayiin Soomaaliya ah aanay aqoon waddaniyad, asaga ka hor laga ma hadli jirin.
Labo sannadood ka hor, gobollada dalka waxaa ka dhacayay dibad baxyo farxad wata oo lagu soo dhoweynayo is beddelka dimuqraadiyadeed iyo xurriyada is doorashada iyo is beddelka xukunka.
Majaladda Foriegn Policy ayaa qortay 10 hab-dhaqan oo muujinaya in keli-talis uu ka dhalanayo dal, haddaad aqriso adigoo wax fahamsan, xaalka dalkana la socda, waxaad arkaysaa in dhammaan calaamadahaas ay muuqdaan.
Sida qoraaga Carabta ahaa uu sheegay, xurriyadda, is-la xisaabtanka iyo is-beddelka xukunka ayaa ka sharaf badan hanta , nabad-galyo iyo adeegyada kale.
Boggiisa baraha bulshada waxaan ku arkay sawir 1990’s billowgeeda ah asagoo jooga America, aniga markaas waxaan ahaa carruur ay xabbado ku dul dhayacaan, agagaarkiisa macluul loogu dhammaanayo, mustaqbal iyo rajo midna aan u muuqan. Waan uga xannuun badanahay dowladnimada, marna ma rabo in Soomaaliya waddadaas lagu celiyo.
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo isu diyaarinaya inuu 2-da Aqal u gudbiyo war-bixin
Qilaafka Golaha Shacabka: Xildhibaanadu ma sharci ayey isku haystaan mise siyaasad?